Sunday, Kenyan Prime Minister Raila Odinga said the African Union should deploy troops in Zimbabwe to help resolve the crisis there.
AU officials also said Zimbabwe is not officially on the agenda of the African Union summit that is set to take place Monday in Egypt. Mr. Mugabe has indicated he will attend that meeting.
In Beijing, U.S. Secretary of State Condoleezza Rice sought China's support for an arms embargo on Zimbabwe. Speaking to reporters, she said it makes sense to deny the Zimbabwean government the means to attack its own people.
U.S. President George Bush vowed Saturday to take new action against Zimbabwe's government for what he called a "sham election" that ignored the will of the people.
Zimbabwean officials reject that characterization. A spokesman for Mr. Mugabe's ZANU-PF party, Bright Matonga, told al-Jazeera television today that "Zimbabweans have spoken" by voting overwhelmingly to re-elect Mr. Mugabe.
Observers Slam Zimbabwe Presidential Run-Off Election